Namuhla ngokuvamile lisetshenziswa enkulumweni yethu tisho, tisho izinkulumo ethandwa. Ngezinye izikhathi siwasebenzisa engacabanganga, ngaphandle kokuqonda ukuthi zisho ukuthini futhi ngaphandle ebuka umsuka lezi zinkulumo.
Ngokwesibonelo, kukhona catch ibinzana lapha - "imfihlo evulekile", esetshenziswa ngokuvamile ngempela, kodwa bambalwa bayazi kahle ukuthi kusho ..
Ukuze siyiqonde kahle le ndaba, kufanele uqale ukuthola ukuthi ngobani labo Punchinello. Abacwaningi abaningi oyikholelwayo ukuthi lena waseshashalazini iqhawe unodoli kwabantu, into lifana Petrushka yethu Russian. Nguyena-joker, joker kanye Teaser nje humpbacked futhi imbiza-bellied.
Thanda parsley, Punchinello, ukukhuluma zesikrini zabo, ukuthethisa abantu izinto aziwa zonke futhi ahlukahlukene. Kodwa ngenxa yezizathu ezihlukahlukene bavame hhayi ukukhuluma ngokuzwakalayo. Lona "imfihlo evulekile" kakhulu yibo bonke.
Ekhuluma "uhlu lozalo" yohlamvu unodoli, kufanele kuphawulwe ukuthi kwakusenesizathu kungekho Petrushka, futhi, cishe, Italian Pulcinella. Empeleni, Kashparek Czech nesiNgisi Punch ngezinga elithile futhi kufanele "bomdabu" Punchinello.
Isici esiyinhloko kanye nobuntu lokhu clown kusukela endulo kubhekwe talkativeness ngokweqile. Futhi uthanda izimfihlo, kodwa awukwazi uwugcine. ngokushesha Punchinello utshela wonke umuntu yonke into, isixwayiso ngesikhathi esifanayo ukuthi izimfihlo ezinjalo akufanele utshele muntu. Ngenxa yalokho, leyo mfihlo ngokushesha sesaziwe bonke. Lokho "imfihlo evulekile" - konke iqiniso owaziwa ukuthi othile uzama nilethe njengomnikelo ukutholakala.
Esinye isici sale French unodoli Folk iqhawe - Ematasa ngu buffoonery. Ngokwe-izigcawu ngesakhiwo obonisa Punchinello udalula ngamabomu yena uyakuba njengesiwula, ukuphishekela umgomo othile. Nokho, kwencazelo "buffoon" futhi "usulu" sahlala naye.
Futhi lapho eFrance ngemva le Thermidor Icebo lika ku ezigcawini zomuzi kuyoba abantu abasha abalandela an amazing, ezihlekisayo imfashini, masinyane washaya igama - "Punchinello," okungukuthi, akunangqondo, clown, eneka ngokwabo kwaze kwaba ukuhleka usulu. Ikhona yini enye indlela ukubiza guys nge uboya omkhulu azithwale ekhanda, kepha efaniswe izindlebe yenja, kanye frock ufushanisiwe?
Nokho satirist onesifumbu, bayazidlalela futhi obuhlinayo, wenza iphuzu wakhe oyinhloko: njengo ngokumemeza, bememeza abantu ongenamthetho, izinto ezazenzeka emhlabeni. Namuhla, igama lakhe akayikhohliwe. Punchinello wonke umuntu imfihlo uyazi, ekhuluma ngaye yonke indawo, kodwa ibonakala ezingaziwa kuze kube manje.
Ngokwesibonelo, ukuba khona eRussia of "amhlophe" futhi "abamnyama" inkokhelo. Ingabe noma ubani kuyimfihlakalo? Cha, yebo, kodwa akekho abaholi balezi namaqhinga ngeke imenze ubulungiswa. Ngaphezu kwalokho, lapho ithola imibhalo kwi-accrual wezazi impesheni acabangele kuphela idokhumenti eliqinisekiswe yi-izibalo, sengathi ukuthi le mfihlo Polishenelya (okungaba umholo ezimvilophini) abazi.
Noma i Eqinisweni ezithakazelisayo, njengoba ukulethwa kwezindlu ukuze iqashwe. Wonke umuntu uyazi ukuthi abanikazi ukuqasha ezindlini ngaphandle ukubhaliswa, izintela abakhokhelwa, kodwa abaqashi wadabule izikhumba ezintathu. Aint it imfihlo evulekile?
Inani le nkulumo, okuyinto wehlele izikhathi zethu kusukela esikhathini eside esidlule - ukubika amaqiniso eside kwaziwa. Kodwa ncazelo yesibili ofihlekile ibinzana - ngobuciko sengathi lokhu truism lizwakele okokuqala.
Incazelo nenjongo ekuphileni
Izici Jikelele wefilosofi Russian: ngezici ezithile futhi izigaba yentuthuko
Ama-aphorisms namacaphuno ngemvula